ဗေဒင် – Page2– Alinyaung
March 15, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
အသက်ကို (၈)နဲ့စား အောက်ပါဂဏန်းကြွင်းသူများ အမှတ်မထင် ထိုသို့ နိမိတ်တွေ့ပါက ထီလေးတော့ထိုးထား ရွှေပြည်သူရွှေပြည်သားတို့ရေ ဦးသိန်းသန်း-ဒေါ်ကုဋေကြွယ်များဖြစ်ကြဖို့ (၄)ရက်ပဲလိုပါတော့တယ် ကျိန်းသေနီးပါး ထီပေါက်စေသောနိမိတ် ဒီလိုပါခင်ဗျာ လမ်းသွားရင်းလာရင်း အမှတ်တမဲ့ ကြက်နှစ်ကောင်ခွပ်နေတာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ နောက်လှည့်မကြည့်နဲ့တော့ ထီဆိုင်ဘယ်မှာရှိလဲချက်ချင်းရှာပြီးတော့သာ ထိုးပေတော့။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဒီနိမိတ်တွေ့ရင် ထီပေါက်ကိန်း ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးရှိနေပါတယ်ထီဆုကြီး ဆုသေးကတော့ အတိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံပါရမီအဟုန် […]
သင် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး​ကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင် ဒီအချက် လေးတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်.. သင် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး​ကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဟူး​ သားသမီး​လေး ​တွေက​တော့ အရမ်း စိတ်​ကြီးတဲ့ သူ​တွေ ဖြစ်​ပါတယ်..​ သူတို့​လေး​တွေက ညဏ်​​ကောင်းသ​လောက်​ အပျင်းကြီးတဲ့ သူ​တွေလည်း ဖြစ်​တယ်​…. ဒါ​ကြောင့်​ ပညာ​ရေးမှာဖြစ်​ဖြစ်​ စီးပွား​ရေးမှာ ဖြစ်​ဖြစ်​ […]
March 11, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ဘယ်လောက်မှန်လဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်လိုက်ရအောင်သင်ရဲ့ နာမည်မှာပါတဲ့ အင်္ဂလိပ် ABCD အက္ခရာ လေးတွေကနေ သင့်ရဲ့ စရိုက်ကို အနီးစပ်ဆုံးနဲ့ အမှန်ကန်ဆုံး ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေး တစ်မျိုး တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ ??? မှန် မမှန်သိချင်ရင် စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင် အများစုကတော့ မှန်တယ်လို့ ဆိုကြလို့ အားလုံးပဲ […]
ပေါင်းဖက်ရန် အသင့်တော်ဆုံး အိမ်ထောင်ဖက်နေ့နံများ
March 4, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
မွေးနံအလိုက် ကံဇာတာ နိမ့်ပါးတတ်သော နှစ်များ( ဗဟုသုတအနေနဲ့ဖတ်ထားနော်) မွေးနံအလိုက် အသက်အရွယ်အလိုက် ကံဇာတာနိမ့်ပါးတတ်ချိန်များ (ကလေးသူငယ်များမှာတော့ ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေး) အားနည်းတတ်ချိန်များကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုသိရှိနိုင်ပြီး ဆိုင်ရာ ယတြာပိုင်းလေးတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်အောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကူးထားပါ။ မိသားစုအတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ သေသဝိဇ္ဇာပညာရပ်အရ သုံးသပ် […]
သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်မှာပါတဲ့ လမ်းကြောင်းလေးတွေက ပြောပြနေသော အကြောင်းများ လက်ဝါးပြင်က လမ်းကြောင်းတွေလိုပဲ လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးတွေကနေလည်း သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို သိနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာပညာတတ်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူနဲ့ လူတိုင်းကြည့်ြ့ပီးနားလည်နိုင်တဲ့ နည်းလေးကိုသုံးပြီး ကံကြမ္မာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပုံမှန်ဆိုရင် သာမန်လူတစ်ယောက်မှာ လက်ကောက်ဝတ်မှာ လမ်းကြောင်း ၂ ကြောင်း သို့မဟုတ် […]
စိတ်ဝင် စားဖို့ ကောင်းပါသည်။ ပထမ ဦးစွာ သင်၏ မွေးလနှင့် မွေးရက်အား မည်သည့် အကောင်က ကိုယ်စားပြု သည်ကို ရှာဖွေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလို သည်မှာ သင်၏ မွေးနေ့သည် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ ဆိုပါစို့။ အောက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် […]
March 2, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
မွေးနံအလိုက် အသက်အရွယ်အလိုက် ကံဇာတာနိမ့်ပါးတတ်ချိန်တွေကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် မွေးနံအလိုက် ကံဇာတာ နိမ့်ပါးတတ်သော နှစ်များ မွေးနံအလိုက် အသက်အရွယ်အလိုက် ကံဇာတာနိမ့်ပါးတတ်ချိန်များ (ကလေးသူငယ်များမှာတော့ ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေး) အားနည်းတတ်ချိန်များကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုသိရှိနိုင်ပြီး ဆိုင်ရာ ယတြာပိုင်းလေးတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်အောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကူးထားပါ။ […]
၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ မတ်လ အတွက် (နေ့စဉ်၊လ) ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများ – March 1, 2018 Myit Ter ၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ မတ်လ အတွက် (နေ့စဉ်၊လ) ဗေဒင်ဟောစာတမ်းများ – ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ။ M.A.K.S ရည်ညွှန်းကိုးကားးရွှေမန်းဗေဒင်ဒိုင်ယာရီ ရောင်ပြန်မဂ္ဂဇင်း
ကံကောင်းခြင်း သဘောဆောင်တဲ့ လက်ကောက်ပေါ်က တြိဂံပုံ …
Rascette lines တွေဆိုတာ လက်ဖဝါး နဲ့ လက်ကြား လက်ကောက်ဝတ် အပေါ်က ကန့်ပေးထားတဲ့ အလျားလိုက် သို့မဟုတ် ကွေးကောက်တဲ့ မျဉ်းကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လက်ကောက်ဝတ် အစင်း အကြောင်း လို့လည်း သိရတဲ့ rascette lines များကို လက္ခဏာဗေဒ မှာ အရေး […]